Man City Oo La Kulantay Guuldaradeedii Ugu Horaysay Xilli Ciyaareedkan Iyo Shakhtar Donetsk Oo Afka Dhulka U Galisay, Xilli Tottenham Guul Ka Gaartay APOEL – Kooxda.com
Home 2017 December Ingiriiska, Wararka Maanta Man City Oo La Kulantay Guuldaradeedii Ugu Horaysay Xilli Ciyaareedkan Iyo Shakhtar Donetsk Oo Afka Dhulka U Galisay, Xilli Tottenham Guul Ka Gaartay APOEL
Man City Oo La Kulantay Guuldaradeedii Ugu Horaysay Xilli Ciyaareedkan Iyo Shakhtar Donetsk Oo Afka Dhulka U Galisay, Xilli Tottenham Guul Ka Gaartay APOEL
Kooxda Man city ayaa la kulantay guuldaridii ugu horaysay ee xilli ciyaareedkan iyada oo ku hor kuftay kooxda Shakhtar Donetsk kulan ka dhacay dalka Ukraine kana tirsanaa tartanka champions leageu.
Tababare Guardiola ayaa ciyaarta ku soo galay shax gabi ahaanba ka duwan shaxdii ugu dambaysay isaga oo xiddigo badan u nasiyay kulanka sabtida ee Manchester Derby.
Kooxda Shakhtar Donetsk oo ka faa,iidaysanaysa garoonkeeda ayaa ciyaarta ku bilaabatay si dar-dar leh xilli city ay isku dayaysay in ay bas-bas ku dajiso ciyaarta.
Kooxda Martida loo ahaa ee Shakhtar ayaa dhalisay goolkeeda 1-aad daqiiqadii 26-aad iyaga oo uu u dhaliyay xiddiga Bernard kaas oo hogaanka u dhiibay kooxdiiisa.
Shakhtar ayaan halkaas ku joogsan waxa ay sii qaadaysay weeraro aan kala joogsi lahayn iyaga oo ku doonayay goolal kale si ayna city ugu soo laaban ciyaarta.
Xiddigaha Shakhtar ayaa helay wixii ay doonayeen waxana ay dhaliyeen goolkii 2-aad daqiiqadii 32-aad iyaga oo uu u dhaliyay xiddiga Ismaily isaga oo ka dhigay 2/0 ay kooxdiisu ku hogaaminayso ciyaarta.
Waxa sidaas ku dhamaatay qaybtii hore oo Guardiola iyo kooxdiisa si cad loogu awood sheegtay lagana dhaliyay goolal laba ah.
Qaybtii dambe ayay City ku soo laabatay ciyaarta iyaga oo ay ka go,antahay in ay ciyaarta wax ka badalaan waxana ay qaadeen weeraro badan.
Laakiin kooxda Shakhtar oo ay guushaas rajadoodu ku xirnayn tahay ayaa si waali ah u difaacday iyaga oo diiday in goolkooda la soo taabto.
Kadib weeraro waali ah oo ay qaadeen kooxda man city ayaa daqiiqadii 90-aad dhalisay goolka 1-aad iyaga oo uu rikoore gool u badalay xiddiga reer Argentine ee Sergio Aguero isaga oo ciyaarta ka dhigay 2/1.
Waxa sidaas ku dhamaatay ciyaar Man city dusha laga saaray guuldaradii ugu horaysay ee xilli ciyaareedka tartamada oo dhan xilli Shakhatar heshay wixii ay doonaysay oo ahayd in ay u soo baxdo wareega xiga.
Dhanka kale Tottenham ayaa 3/0 uga badisay kooxda Apoel iyada oo dhamaystirtay rikoorkooda guuldaro la,aanta ee wareega Group-yada
Chelsea Oo Diyaar U Ah In Eden U Ogolaato In Uu Ku Biiro Man City & Hal Shardi Oo Ay Ku Xidhay
Taageerayaasha Man United Oo Aan Ku Farxi Doonin Waxa Uu Cristiano Ronaldo Samaynayay
Jose Mourinho Oo Ku Qasbanaan Kara In Uu Xiddig Kooxdiisa Jooga U Ogolaado In Uu Ku Biiro PSG & Sababta Oo La Ogaaday